मुक्तिनाथ मन्दिरको यस्तो रहस्य ! १०८ धारा नै किन ? – live 60media
मुक्तिनाथ मन्दिरको यस्तो रहस्य ! १०८ धारा नै किन ?
पशुपतिनाथमा मूख्य रूपमा शिवजीको पूजा हुने गर्दछ। त्यसैले गर्दा नै पशुपतिनाथालाई शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जौन, गाणपत, नाथ, सिख आदि प्रमुख सम्प्रदायका भक्तजनहरूले समान आस्था र श्रद्धाको दृष्टिकोणले हेर्ने गर्दछन्।
साथै यस क्षेत्रमा विभिन्न सम्प्रदायका विभिन्न स्मारक एवम् पूजास्थल अखाडा पनि रहेका छन्। आजको धर्म अङ्कमा हामी तपाईँहरूलाई जन्मदेखि मृ’त्यु सम्मका सबै संस्कार सम्पन्न गरिने नेपालको यस पावन स्थलको बारेमा केहि रोचक तथ्यहरूको बारेमा जानकारी दिन गैरहेका छौँ।
यो पनि पढ्नुहोस् :सोमबार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ?:सोमबार:१. सोमबार जन्मेका व्यक्तिहरुको स्मरण शक्ति निकै तेज हुन्छ ।२. तपाईं मृदुभाषी हुनुहन्छ तर तपाईं निकै मुडी हुनुहुन्छ ।३. तपाईं निकै संवेदनशील हुनुहुन्छ त्यसकारण निकै चाँडै नर्भस हुनुहुन्छ ।४. तपाईंलाई आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन निकै रमाइलो लाग्छ ।५. तपाईंका लागि सम्बन्ध निकै महत्व राख्नेछ ।६. तपाईं पढाईमा तिक्ष्ण हुनुहुन्छ र आफ्नो करियरमा निकै माथि पुग्नुहुन्छ ।७. सोमबार जन्मने महिलाहरु भविष्यमा निकै माया र केयर गर्ने श्रीमतीको रुपमा परिचित हुन्छिन् ।
← एउटै ढुंगाबाट शिव लिङ्ग,भोजेश्वर शिव मन्दिर ॐ लेखेर एक सेयर गर्नुहोस् !!!
दुखीलाई सहयोग गर्न आफ्नो सबै सम्पत्ती धितो राखेर १० करोड ऋण लिँदै सोनु सुद →